Ntugharị NAV nke anaghị anabata na 727
Ntugharị NAV nke anaghị anabata na 727 6 ọnwa 1 izu gara aga #1586
Achọpụtala m nzukọ na intanetị ma enweghị m ike ịchọta nsogbu m. Ebudatara m ihe 727 na n'ihi ihe ụfọdụ na 727 enweghị m ike idozi ugboro ugboro NAV maka NAV1 ma ọ bụ NAV2. Agbalịrị m idozi ha na kokpiiti mepere emepe na kopiiki ọkọlọtọ, mana m pịa ebe ọ bụla nso NAV ugboro ugboro ọ nweghị ihe ọ bụla. ADF na COMM na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ nwere onye hụtụrụla maka nke a?
Ntugharị NAV nke anaghị anabata na 727 6 ọnwa 1 izu gara aga #1588
Ndewo, ị jiri bọtịnụ mousse aka nri?
Ntugharị NAV nke anaghị anabata na 727 6 ọnwa 1 izu gara aga #1589
Ndewo, m na-anwale bọtịnụ aka nri na aka ekpe ma ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme. M na-enweta obere mkpịsị aka mgbe m na-atụgharị bọtịnụ na + na - ihe ịrịba ama, mana ọ naghị azaghachi na ịpị m. Otu ihe rụpụtara na Virtual Cockpit na Cockpit.
Ntugharị NAV nke anaghị anabata na 727 6 ọnwa 1 izu gara aga #1590
Ok, mgbe ahụ nwaa iji mousse wiil iji bulie / ibelata ọnụọgụ
Ntugharị NAV nke anaghị anabata na 727 6 ọnwa 1 izu gara aga #1592
Naanị nwara nke ahụ ma onweghị nzaghachi ọ bụla. Arụ ọrụ na COMM mana ọbụghị nke ọ bụla n'ime NAV.
Ntugharị NAV nke anaghị anabata na 727 5 ọnwa 2 izu gara aga #1613
Enwere m otu nsogbu, enweghị ụzọ isi na-akụ ugboro ugboro
Oge ike page: 0.233 sekọnd